စောငျ့ရှောကျသူမရှိပဲ ပကျြစီးနတေဲ့ တတိယနိုငျငံကိုတညျထောငျခဲ့သူ ဦးအောငျဇယြေ ရဲ့ ဂူဗိမာနျ – Daily Feed MM
Admin_John | May 5, 2020 | News | No Comments
“သမိုငျးကို တနျဖိုးမထားတတျတာ ဖြောကျပဈတတျတာ တို့မွနျမာလူမြိုးတှလေား”
*မိမိရဲ့ အားလပျရကျလေးမှာ မှနျပွညျနယျ ဘီးလငျးမွို့နယျထဲက ကငျးရှာမှာရှိတဲ့ သရကျတောကြောငျးတိုကျနားက အလောငျးမငျးတရားကွီး ဦးအောငျဇယြေ အုတျဂူလို့ ကွားဖူးတာနဲ့ ဝငျရောကျလလေ့ာခဲ့မိတယျ ….။
*အုတျဂူသညျကား အတျောပကျြစီးနပေါပွီ။ ရှေးလကျရာ မငျးသမီးရုပျ နတျရုပျ မွှရေုပျ လိပျရုပျ စသညျဖွငျ့ အရုပျမြားမှာ ခေါငျးမြားပငျ မရှိတော့ခြေ။ ရာသီဥတုဒဏျ ကာလရှလြေ့ားမှု ဒဏျမြားက အုတျဂူကို အတျောကို ပကျြဆီးစခေဲ့လပွေီ။
*မွနျမာတှေ ထိုငျးနဲ့ဘောကနျရငျ ဦးအောငျဇယေကြို “တ”ကွတယျ။ နိုငျပါလိမျ့မယျ…. အားကွီးကွီး ။ မနိုငျရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ခုမှ သိတော့တယျ….။ သူ့ကိုတနျဖိုးမထားဘဲ “တ”နမှေတော့ ရမယျမထငျ။
*ထိုငျးမှာ အယုဒ်ဓယမွို့ဟောငျးကို သခြော ထိနျးသိမျးထားမှုတှထေဲမှာ ဦးအောငျဇယြေ နှငျ့ ပတျသတျတာတှေ အကုနျ နဂိုအတိုငျးပဲ။ သူတို့လူမြိုးတှရေဲ့ သမိုငျးကို တနျဖိုးထားမှုက တို့လူမြိုးတှနေဲ့ ဘာမှမဆိုငျဘူး။
*ဦးအောငျဇယေကြို ထိုငျးတှရှေုံးခဲ့တာကို ခုထိသူတို့မြိုးဆကျသဈတှကေို အားလပျရကျမှာ တကူးတကလိုကျပွတုနျး။ အရှုံးသမားဖွဈရတဲ့ ဘဝကို မမဖေို့ပေါ့။ တို့လူမြိုးတှကေ နိုငျခဲ့တာပါ ။ ပိုပွီးဂုဏျယူဝံ့ကွားစှာ တနျဖိုးထား ထိနျးသိမျးသငျ့တာပါ။ ဒါမှ တို့မြိုးဆကျသဈတှကေို သမိုငျးဝငျခေါငျးဆောငျတဈဦးရဲ့ စိတျဓာတျတှေ ဖွဈပျေါလာစဖေို့ အားကစြရာပဲ မဟုတျပါလော…..။ ခုတော့ ….. ခုတော့….
*သမိုငျးကို တနျဖိုးမထားတတျတဲ့ ကိုယျ့မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ စိတျဓာတျကိုပဲ ပွေးမွငျမိတော့တယျ…..
*အားလုံးခေါငျးဆောငျကောငျးတဈဦးရဲ့ စိတျဓာတျကို အတုခိုးနိုငျပွီး သမိုငျးကိုတနျဖိုးထားတတျပါစလေို့သာ တိုကျတှနျးပါရစေ…..။
“သမိုင်းကို တန်ဖိုးမထားတတ်တာ ဖျောက်ပစ်တတ်တာ တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလား”
*မိမိရဲ့ အားလပ်ရက်လေးမှာ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ်ထဲက ကင်းရွာမှာရှိတဲ့ သရက်တောကျောင်းတိုက်နားက အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ အုတ်ဂူလို့ ကြားဖူးတာနဲ့ ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့မိတယ် ….။
*အုတ်ဂူသည်ကား အတော်ပျက်စီးနေပါပြီ။ ရှေးလက်ရာ မင်းသမီးရုပ် နတ်ရုပ် မြွေရုပ် လိပ်ရုပ် စသည်ဖြင့် အရုပ်များမှာ ခေါင်းများပင် မရှိတော့ချေ။ ရာသီဥတုဒဏ် ကာလရွေ့လျားမှု ဒဏ်များက အုတ်ဂူကို အတော်ကို ပျက်ဆီးစေခဲ့လေပြီ။
*မြန်မာတွေ ထိုင်းနဲ့ဘောကန်ရင် ဦးအောင်ဇေယျကို “တ”ကြတယ်။ နိုင်ပါလိမ့်မယ်…. အားကြီးကြီး ။ မနိုင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခုမှ သိတော့တယ်….။ သူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲ “တ”နေမှတော့ ရမယ်မထင်။
*ထိုင်းမှာ အယုဒ္ဓယမြို့ဟောင်းကို သေချာ ထိန်းသိမ်းထားမှုတွေထဲမှာ ဦးအောင်ဇေယျ နှင့် ပတ်သတ်တာတွေ အကုန် နဂိုအတိုင်းပဲ။ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းကို တန်ဖိုးထားမှုက တို့လူမျိုးတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။
*ဦးအောင်ဇေယျကို ထိုင်းတွေရှုံးခဲ့တာကို ခုထိသူတို့မျိုးဆက်သစ်တွေကို အားလပ်ရက်မှာ တကူးတကလိုက်ပြတုန်း။ အရှုံးသမားဖြစ်ရတဲ့ ဘ၀ကို မမေ့ဖို့ပေါ့။ တို့လူမျိုးတွေက နိုင်ခဲ့တာပါ ။ ပိုပြီးဂုဏ်ယူဝံ့ကြားစွာ တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသင့်တာပါ။ ဒါမှ တို့မျိုးဆက်သစ်တွေကို သမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ အားကျစရာပဲ မဟုတ်ပါလော…..။ ခုတော့ ….. ခုတော့….
*သမိုင်းကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပဲ ပြေးမြင်မိတော့တယ်…..
*အားလုံးခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အတုခိုးနိုင်ပြီး သမိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါစေလို့သာ တိုက်တွန်းပါရစေ…..။
နှာခေါငျးစညျ(mask)မြား ဈေးတငျရောငျးပါက ဝနျဆောငျမှု ဥပဒအေရ ထောငျ ၃ နှဈ ခမြညျ